I-5G inthanethi kulo lonke elaseNetherlands isipho noma ijele lakho ledijithali? : UMartin Vrijland
I-5G inthanethi kulo lonke elaseNetherlands isipho noma ijele lakho ledijithali?
ahanjiswe IZINDABA IZIMPENDULO	by UMartin Vrijland	ngo-7 December 2016	• 47 Amazwana
Kuyoba khona i-superfast internet yezwe lonke. Njengegesi, amanzi nokukhanya, uhulumeni ukhuthaza ukufinyelela kwe-wireless kuwebhu yomhlaba wonke njengesidingo esiyisisekelo. Yilokho okushiwo yi I-Telegraph izihloko zamanje namuhla. Ubani ongafuni i-intanethi ngokushesha manje? Imibiko ye-Degragraaf [ukucaphuna] Akufanele nje kube khona i-intanethi engenazintambo noma kunini nanoma yisiphi isikhathi, kodwa ukuxhumana kufanele kube nekhwalithi elihle kakhulu. Wonke umuntu kufanele akwazi ukubuka amavidiyo kumakhalekhukhwini wakhe yonke indawo kanye nokuzijabulisa kwekusasa njengoba izimoto zokuzishayela azikwazi ukwenza ngaphandle kwe-inthanethi enkulu. Ukuqaliswa kwe 5G, umlandeli wenethiwekhi ye-4G yamanje, ifike kubahlinzeki be-telecom. Lokhu kungabonakala kumemorandamu enyatheliswa nguNgqongqoshe Kamp (Economic Affairs) namuhla. Kungakhathaliseki ukuthi i-5G iphinde isho ukuthi izindleko eziphakeme azikaqiniseki. Umhlaba we-telecom ulindele ukuthi lokhu kuzovela. Izindleko eziningi zokutshala izimali sezivele zenziwe uma kukhishwa i-4G. Esikhathini seRotterdam naseThe Hague, kuze kufike ku-2050, mayelana ne-50 billion ibalwa ukuguqula lesi sifunda. I Imibiko ye-AD [ukucaphuna] I Metropolitan Area, leli bhizinisi ahlangene eHague, Rotterdam nomasipala ezungezile 21, ikhula ngesisekelo lesi Luyinkombandlela babe frontrunner e izinguquko kwezezimboni lwesithathu, ngokuqinisekile phikisana. Inethiwekhi ye-5G nayo iyisidlali esikhiye kule phrojekthi. Yilokho okuncane: 'inguquko yesithathu yezimboni'! Kuzobe kuphi lapho kunezinhloso?
Nge-5G, ikusasa lisondela kithi ngesivinini. Ngoba ayisekho bakwazi ukulanda ama-movie ngokushesha, kodwa zikagesi smart, navigation drones nezimoto self ezinezinjini futhi ehileleke traffic. Okungenani, yilokho okudingeka ukwazi uma kufike ku I-Telegraph amanga. Lokho kuzwakala ecacile ngisho kangcono uma siphethe ekwakhiweni-movie yesayensi. Buyela esikhathini esizayo e-Netherlands! Kulungile kwesokudla? Kodwa uke ubone yini okucatshangwa ngezingozi zonke lobu buchwepheshe emangalisayo lapho inethiwekhi ke 5G kuyadingeka? Ngisalalele alikhulumi imvamisa lapho lezi amanethiwekhi kanye ngemiphumela elimazayo engase ibangelwe on your brain. Cha, ngikhuluma ngani inethiwekhi enikeza ithuba umnyuziki ukuqapha zonke izinyathelo ulandela yonke ingxoxo, funda yakho izinga lokushisa komzimba nokugeleza kwenhliziyo kanye nemizwelo ezingaba eavesdrop yezingcingo zakho kanye nefoni yakho ikhamera njengoba abone konke-iso iyatholakala. Khona-ke ngikhuluma ngokugcwele okugcwele ekuqaliseni kwakho njengabantu. Ngeshwa, ngiyazi ukuthi lokhu akukuqinisekisi. Isilinganiso umDashi okungukuthi ecabanga singaphila best George Orwell 1984 ngoba "akukho engikufihlayo" esisodwa. Kumele ngifinyelele izingxabano ezinamandla.
Ukuze ukwazi ukukholisa 'internet sezinto' futhi inethiwekhi 5G akusho ikusasa elinjalo eliqhakazile njengoba ucabanga, ngimele ubheke ivangeli 'Singularity' se-Google lobuchwepheshe abakhulu, isazi sefilosofi umsunguli Ray Kurzweil. I Singularity yisikhathi lapho i-Inthanethi kanye nentuthuko kwezobuchwepheshe is ahlanganisiwe ngokugcwele biology yomuntu kanye nemvelo (futhi yonke uma uthanda). Phakathi ukuphila kwakho uyahamba ukwenza kube ngisho sinekhono kanye nokusebenza MacBook yakho ine ubukhulu yeseli igazi futhi ingena emzimbeni wakho. Phakathi neminyaka embalwa eyalandela singakwazi connecten ingqondo ku-inthanethi kanye nolwazi kanye namandla yezamakhompyutha Thenga e 'efwini. Kuzoba khona ukuhlanganiswa komuntu nomshini emashumini eminyaka ezayo. Umuntu ulungele kancane kancane ukuhlanganiswa nobuchwepheshe. Ekugcineni, lokhu kufanele kwenziwe e 2045 kuholele ekungafi komzimba futhi ukwazi ukuhlala izinto zangempela zedijithali ezingenakuhlukaniswa nangokoqobo. Lokhu kungenxa ye-nanotechnology engena esikhundleni sezinto ezifayo futhi ezibuthakathaka emzimbeni wethu futhi ekugcineni zizothatha ngokuphelele i-biology yokuqala. I-movie Ukudlulisa bonisa lokhu kahle. Konke lokhu kuvela emlonyeni womuntu obhekene nezinkulungwane zezigidi zokutshalwa kwezimali ngu-Google nokusungulwa kwamaphrojekthi amaningi enyuvesi njenge- University of singularity: Ray Kurzweil.
Futhi uma amashumi eminyaka alandelayo ekhona kulowo mqondiso, ungase ucabange ukuthi njenge-cyborg uzobe uzwela kakhulu ngolwazi oluzolayishwa ngqo ebuchosheni bakho. Lapho sisakhuluma 'ngokulawula kwengqondo'-izinkinga ezinjengezinhlelo ze-NLP ohlelweni lwezokuxhumana nolwase-subliminal noma oluthonya nge-HAARP, maduze sizophela ezweni lapho ungakwazi ukuphathwa ngokuqondile. Ngakho Telegraph ongathi inethiwekhi 5G kuyasiza drones, izimoto self ezinezinjini nokunye, kodwa umgomo wangempela mhlawumbe ubuchopho bomuntu. Izinhlelo zokugoma zisilungiselele ubuchopho bethu ngalesi sigaba se-transhumanism (lalela lo kusakazwa komsakazo). Futhi uma nano-zinhlayiya esikhathini esizayo esiseduze (noma kakade) umzimba wakho kungaba ngesinyenyela ngokusebenzisa emoyeni (like a virus), khona-ke ukukhomba wenethiwekhi yakho esithinta izinzwa, lokhu kuzoba Fusion yomuntu kwi-Inthanethi ngaphandle kwakho unayo. Ngamafuphi: ukuhamba komthamo we-intanethi ukuxhumana okuningi nomshini womuntu lapho uzokwazi ukuguqula ukungaqapheli noma ukuqonda. Isizukulwane esincane sizozikhethela ngokwabo (ngoba sizohlinzeka ngamathemba okusebenza) futhi ngokukhethekile zilungiswe ngemigomo; isizukulwane esidala sizogonywa nge-vaccinations. Kungenzeka futhi ukuthi kungenzeka ukuthi sivusa lezi zinhlayiya ze-nano noma sidlule esikhumbeni (imvula). Ingabe lokho kuzwakale njengomcabango we-idiotic? Okwamanje kubonakala kudingekile ukuze uhlanganyele ubuchopho transceiver langempela sibekwe ngaphansi Yekhanda, kodwa ukuthuthukiswa uthuli kwemizwa 'kakade ihlinzeka ukuxhumana ngqo phakathi komuntu umshini (internet) ku, ezingeni yokwamukela (bheka le nkulumo). Lokhu kusho ukuthi maduzane uzobona ukuthi abafundi balanda ulwazi lwabo ngexhumano lobuchopho 'efwini' futhi lokho Ukungathandwa kwabathelisi esikubona Umbono wethu wokubuka umsindo uzodlula. Ngakho ukuxhumana okungenantambo nobuchopho bomuntu yingxenye encane ekuthuthukiseni ubuchwepheshe. Ungayibona njengentuthuko enhle kwezobuchwepheshe; isinyathelo esisha ekuziphendukeni komuntu noma njengeteknoloji evumela ukuthi i-intanethi engenazintambo ibe yinkimbinkimbi ye-digital. Uma isimo sokutshala imali kuleso simo ngokuvamile sizuzisa.
Bheka ngezansi indlela abanye abavangeli ka transhumanism kanye Singularity emhlabeni uzame esihlwabusayo nge amathuba engapheli yalezi yentuthuko kwezobuchwepheshe, ngaphandle kokukhuluma enkulu ingozi ukuncika intelligence yokufakelwa futhi uhlelo amandla kulawulwa abaqhubi amanethiwekhi kanye mainframes (amakhompiyutha aphakathi). Ucabanga ngakho? Bese uzama ukucabanga ngalokho ongakwenza ukuze uguqule lezi zintuthuko.
Ukufakwa ohlwini kwezixhumanisi: telegraaf.nl, ad.nl, telegraaf.nl, su.org
'I-Horizon Zero Dawn' ephuma e-Amsterdam yenkampani yokudlala uGuerrilla Games 1e isinyathelo ekubhekeleni kwangempela okungathandwa kwabathengi
U-Elon Musk usomabhizinisi omkhulu noma i-DARPA signboard for transhumane cyborg man?
Ukuthi i-Facebook isebenza kanjani ngokucwaninga nokulawula okungaphezulu nokuningi okufanele ukwenze
Isenzo sokudonsa: umthetho omuhle kakhulu ovela kuHottonk's top hat!
I-Transhumanism, yiyiphi leyo futhi kungani kuyingozi manje?
Amathegi: 5G, cyborg, afakiwe, google, internet, Ray Kurzwel, ubuningi, ubuningi, transhumanism
7 December 2016 ku-12: 52
Xhuma i-D-Wave Quantum futhi ubuningi bungasetshenziswa ngokuqondile, into kuphela elahlekile yimvume. Ngokuqaphela noma ngokungazi ukuthi usebenzisa imiyalezo engaphansi kwe-subliminal:
U-Eric Ladizinsky ungumbusi ophezulu wezokuphathwa kwesayensi onesizinda esinamandla e-physics, ubunjiniyela, izinto zokwakha, ukukhiqizwa nokwakhiwa kweqembu. UMnu. I-Ladizinsky ihola umzamo wezobuchwepheshe we-D-Wave ukuthuthukisa inqubo yokuhlanganiswa kwesifunda edidiyelwe ephezulu futhi ivame ukubizwa ukuba ishumayele kuzo zonke izici ze-quantum computing. E-Northrop Grumman Space Technology (eyayiyi-TRW, Inc.), ugijime uhlelo lweDARPA olwama-multi-dollar ku-Quantum Computing ngokusebenzisa ubuchwepheshe besifunda obuhlanganisiwe obuphezulu. UMnu. I-Ladizinsky ine-BSc. I-Physics ne-Mathematics evela eNyuvesi yaseCalifornia, eLos Angeles futhi inguProfesa oPhethe weFhysics eLoyola Marymount University.
7 December 2016 ku-12: 56
Isiqubulo se-University of Loyola Marymount:
I-Ad majorem Dei gloriam Tua Luce Condige
Ngokuba inkazimulo enkulu kaNkulunkulu Yisiqondise ngokukhanya kwakho
Nguyiphi uNkulunkulu futhi yikuphi ukukhanya?
7 December 2016 ku-13: 30
Abatshalizimali ku-D-Wave bafaka:
- Goldman Sachs (ukukhwehlela kweDraghi)
- In-Q-Tel (nikeza amandla aphezulu we-CIA, i-DIA, i-NGA)
- UJeff Bezos (i-Amazon) manje uhlabelela insimbi, izitolo zabasebenzi mahhala
Izinhlelo zisetshenziselwa, phakathi kwabanye, i-NASA, i-Google, i-Lockheed, i-USC Information Sciences Institute.
7 December 2016 ku-13: 42
I-commercial ye-Amazon inezici eziningi ezihambisana nalokhu kuhweba okudala kusuka ku-IBM (Watson) futhi akuyona into engafanelekile.
7 December 2016 ku-20: 42
Le teknoloji ye-RFID isivele isetshenziselwa ezitolo ze-Decathlon eBelgium.
Vele uthathe izinto zakho, ushayela inqola yakho ngokusebenzisa isithwebuli bese ukhokha kumshini.
7 December 2016 ku-21: 21
@CuriousOne, kungaba yimi. Kodwa angijabuli ngokukhethekile ngalokhu, abantu bathi ukuswela kungumuntu. Kodwa kungakanani okunye okufihlekile kulokhu okulandelayo?
8 December 2016 ku-21: 00
Igama le-IBM lilokhu likhuphuka mayelana ne-RFID. Ukubandakanyeka ngokungaqondile kumaphrojekthi kanye / noma izinkampani ezifana ne-Verichip / PositiveID. Okukhiqizwa futhi nguRaytheon Microelectronics. Ngemuva kweWWII, i-IBM ibonakala ithola ubuchwepheshe obungacacile, cabanga ngomshini weHollerith, okuhlose ukulawula nokulawula abantu kodwa hhayi ukuwayeka.
Ngokuhlanganisana, izinkampani zezimali, ukuthatha i-takeovers njll zizama ukusula ithrekhi yayo. Kodwa lokho akusebenzi ngempela:
http:// http://www.secureidnews.com/news-item/* i-verichip-steel-vault-ukuhlangana-kuya-ifomu-positiveid /
Kufanele sifune lokhu konke ndawonye? Masihlale siphapheme, siqaphe futhi ngaphezu kwakho konke okubucayi!
7 December 2016 ku-14: 12
@Averroes, uphawu lwe-cube olumnyama lungcono ebusweni bakho.Angakafiki isixhumanisi ne-D-wave, kodwa kubonakala sengathi lezo zinkampani ziphishekela i-agenda ehlanganyelwe.
7 December 2016 ku-14: 53
Cha akukubonga ngomusa IBM, angikudingi usizo.
"Cabanga nge-branding ka-Watson, yini ngempela u-Watson ashoyo? Yebo, kunengqondo futhi ifu, kodwa ekupheleni kosuku, kuwukusiza abantu benze izinqumo ezingcono, "kusho uPeluso.
7 December 2016 ku-14: 58
Laba abaqondisi bemakethe, ngicabanga ukuthi i-idiots ewusizo abazama ukuthengisa umkhiqizo ngaphandle kokwazi okushiwo. I-IBM ne-WWII ukuxhumanisa ukuthi i-Averroes eyenziwe engxoxweni yangaphambili yangenza ngicabanga.
7 December 2016 ku-15: 28
@Riffian, akuyona nje izinkampani ezifana ne-IBM, Siemens, i-Amazon. Kuyinto iwebhu yomhlaba wonke, kuyinto ehlekisayo kanye ne-macabre ukuthi wengeza i-WWII ngoba akuyona into engavamile. U-Adolf onjalo unesizo esanele esivela ezinkampanini zomhlaba wonke ukuphishekela i-ajenda yakhe, kuyiqiniso ukuthi u-Israyeli ukhona ngomusa kaHitler:
Izinhlamvu zemali zafakwa ukuze zifakwe ngaphansi kwe-swastika ngakolunye uhlangothi kanye neNkanyezi kaDavida ngakolunye uhlangothi. Ngakho-ke uhlelo olulawula nokulawula izinhlangothi zombili zemali efanayo.
Kuqhubeka namanje uma ubheka izinkampani ezisasebenza. Isibonelo sesikole lapha ku-NL sinhlangano enjenge-RTL.
Random House ukushicilela. Inkampani yomzali kaRandom House, uBertelsmann AG
amaNazi ... ashicilela inkulumo-mpilo kaHitler, nencwadi ethi "Inzalo kanye ne-Euthanasia: Umnikelo Wokusetshenziswa Kwezimiso zobuKristu".
8 December 2016 ku-16: 32
Izingcaphuno eziningi manje zichaza kimi okuningi:
UGeorge Orwell 1984:
", Ngabe abelethwe Noma yimuphi Sound Lokho Winston wenza, phezulu zidlule umnyenyezo aphansi kakhulu kuze ngakuwo, ezingaphezu hushazela njengoba Wahlala ngaphakathi emkhakheni umbono kanjani abalandeli abaningi uqwembe metal wayala, yena kungabonwa kanye wezwa. "
Umndeni wakwaBush kanye nabanakekeli beNAZI:
"George Herbert Walker Bush:" Sarah, uma abantu baseMelika wake uthole ukuthi yini esiyenzile, theywould ukusixosha ngomgwaqo nakuzo Lynch kithi ". Yilokho lesisho edumile by 1992 George Herbert Walker Bush wathi u Sarah McLendon, intatheli Texas ngubani Bush ababengalazi iminyaka nowayekhona ukuzila elikhulu White House press amabutho ngaleso sikhathi. "
7 December 2016 ku-14: 23
I-barbecue engabonakali, lapha ukulanda kuthatha isikhashana
unayo yonke futhi kuyoba khona i-rap ngaphezulu ...
8 December 2016 ku-21: 37
Kubantu baseBelgium kukhona uhlu lwamasts / antenna emasipala waseBelgium:
noma vele nje http://www.sites.bipt.be/ -> isayithi lokusesha -> faka ikhodi yesayithi / ikhodi yeposi / igama lomgwaqo.
8 December 2016 ku-21: 44
U-Proximus (umhlinzeki waseBelgium kanye nenkampani yombuso waseBelgium) uphawula njalo i-1 billion kwinethiwekhi yabo, lokhu kungokwenza ngcono namasayithi amasha wokwakha. Bangathanda ukunikela nge-2020G ku-5. Ku-2017 bazoqala ukwakha i-4.5G, okungenzeka ukuthi ibe kwi-2100MHz noma i-2600MHz imvamisa.
I-KPN eNetherlands isivele isebenza ngalokhu.
Phakathi naleso sikhathi, Telenet (Belgium, Netherlands Ziggo, inkampani ezibazali bazo Liberty Global kusekelwe e Denver, Colorado, USA) wathenga Telecom opharetha Base futhi waqala sesimanje kwabo inethiwekhi. Ngemva Sekuyisikhathi eside iminyaka yokuqala esetshenziswa inethiwekhi Orange futhi lokhu imali akhishwa ukuba ukwandisa inethiwekhi umthamo wabo wokusebenza. Futhi baye futhi inikezwe 150 kwezigidi ezingu ukwenza kuze 2018 ukusetshenziswa kunethiwekhi yabo.
Kodwa Okwamanje le uphethiloli ukucabhela e Burum Netherlands uyanda inethiwekhi 5G amaza 3400MHz futhi 3800Mhz ngendlela yokuthi basebenzisa lokhu imvamisa uxhumano satellite yabo.
7 December 2016 ku-15: 38
Noma kunjalo yenza uketshezi ngokusebenzisa izinhlayiya ze-nano ngokukhanya okuhlukile. UHarald Kautz Vella usuvele esitholile isixhumanisi (isifo se-Morgellons) kanye nengxoxo noKirzweil nalesi sibalo u-Eric Drexler unikeza ukuqonda ngesixhumanisi ne-AI.
7 December 2016 ku-15: 40
Esinye isibalo esithakazelisayo nguZionazi Marvin Minsky:
7 December 2016 ku-16: 28
Uyayivuma ngokulinganayo kusuka ku-12: 45:
"NGICABANGA UKUTHI ukukhathalela abantu kufanele babe esezansi eyishumi noma TWO AKULONA UKUTHI KUKHONA UYOBA EKWENZENI IZINTO ukuthi amaphekula zibangele KUBO kodwa kunalokho UHLELO ezibe khona okwenziwayo ... Phakathi kwezinye izinto, becindezelwa 'NOBUPHEKULA' KUYODINGEKA kuphumelele futhi singasetshenziswa ukucindezela NEZINTO bakhetha hHAYI OKUMELWE Abacindezelwe. "
9 December 2016 ku-14: 07
Isiqephu esibaluleke kakhulu sefilimu esitholakalayo! Landa futhi usakaze!
Umsunguli we-nanotechnology oxwayisa ngengozi enkulu kakhulu!
7 December 2016 ku-16: 46
I-Google DeepMind AI yenza kahle
7 December 2016 ku-16: 53
@ZalmInBlik, KULUNGILE futhi manje omkhulu ufika. Xhumanisa lolu cwaningo ku-Face2Face kusuka:
Max Planck Institute, eStanford naseYunivesithi yase-Erlangen-Nuremberg.
Ngakho-ke umbono wakho ungasetshenziswa ngendlela yokuthi lokho okubona ngokuzwakalayo ngokusebenzisa okuphakathi njenge-TV akuhambisani neqiniso.
7 December 2016 ku-16: 59
7 December 2016 ku-17: 40
Izixhumanisi ezithakazelisayo, ezichaza ukuthi yimaphi amagama anjengokuthi 'uthuli oluthile', 'grey goo' njll.
I-Global Smart Dust ingaba yi-intanethi ephezulu yezinto
Ekupheleni kwe-1990s, iNyuvesi yaseCalifornia, uprofesa uKristofer Pister wahlanganisa igama elithi "uthuli oluhlakaniphile" olubhekisela ekuboneni okuzimele nokukhulumisana emitha yemitha.
Kuyini iGrey Goo?
Akunjalo ngempela grey, hhayi gooey, "grey goo" kokubili into nanotechnological kanjani abalandeli abaningi Kwandisa exponentially ngokungenamkhawulo okusebenzayo kanye simo yezinto Ngazo mass loMhlaba - noma yonke - is ecotophaged ku nanobots self-ukuzandisa.
7 December 2016 ku-19: 20
Uthole idokhumenti / isethulo ephelele.
Lokho engikuqaphele ukuthi le nkulumo yenzeke ngaphambi kokuba i-9-11-> I-Rumsfeld inexhumano lwe-DARPA futhi ibe 'uNobhala' UNobhala Wezokuvikela waseMelika. Inikeza esinye isici ku-'Pearl Harbour 'yeProjekthi yekhulu leNew American.
7 December 2016 ku-21: 11
Izipikili nezinhloko, i-9-11 yayidingekile ukuze 'imvume yomphakathi' (i-Patriot Act) iqale ngokusemthethweni futhi isebenzise le ajenda. Ukubhekisela kwakho kuPearl Harbor akumangazi, ngoba nathi sisempi. Impi engabonakali ngandlela-thile ekuqaphelweni nasekuphefumulweni kwabantu.
Kuyinto impi ehlanganisa yonke indawo futhi hhayi nje impi zakudala ihlelwe kuphela empini. Umoya ojulile uwubiza ngokuthi 'ukubusa okugcwele kwe-spectrum' futhi ubukhulu esibuxoxayo lapha buyisisekelo esivumelwaneni ne 'Biological warfare'. Basebenza kuwo amashumi eminyaka futhi bazama ngisho nezinambuzane: http://www.thesmokinggun.com/file/attack-killer-mosquitoes-0
I-Chemtrailing ingenye indlela 'yezimpi ze-Biological' futhi iqinisekisa ukusatshalaliswa kwezinhlayiya ze-nano. Ngokusho kwe-MSM zionazi uDkt Goebbels propaganda à la Bertelsmann AG (RTL) akudingeki sikhathazeke.
"Uma unamandla, gwema. Uma kuwukuziphatha okuphakeme, cindezela. Bathobekile ukuze uzigcwalise. Uma ukhululekile, ubaqede. Uma unobunye, bahlukanise. Ukuhlasela ubuthakathaka babo. Bashaywa umxhwele. "
8 December 2016 ku-13: 07
Sisekhona imfundiso yezingxabano kanye nezimfundiso ze-entropy. Kuhlelo oluvaliwe, isibonelo, konke kuvame ukwandisa i-entropy (i-logarithm engafanele yezo zonke izimo).
Kodwa kungenzeka: I-Ordo ab chaos kungenzeka kuphela uma (noma nini) engeza amandla amaningi.
Inhloso uberhaupt umbono (s) ukuthumela abantu besebenzisa umzimba kunendawo enkulu engahlolwa amarobhothi futhi ingqondo abangena ibhizinisi kuyinto travesty, kuyinto uma ikholwa ukuhlambalaza okumsulwa futhi uma ungenalo ubuhlanya, ubuhlanya lobugebengu izakhi Imininingwane psychopathic ezingabazisayo (ngezinye izikhathi indoda ngokuthi) nge Imininingwane wokwandisa entabeni egos eqolo, okuyinto alihlobene neze kungasali nelincane uzwela nothando imvelo futhi umqondo womuntu ukuthumela indoda nesintu, ifa nokuhlukumeza kwenetisa ka obunonya yabo gederailleerde nenkanuko.
Lolu hlobo 'lwabantu' (ngibabiza ngokuthi izigebengu) alukude ekhaya. Empeleni, kufanele uzizonde ngoba empilweni yakho nasemndenini unemizwa eminingi yecala nokungaqondakali okungaqondakali kwezemvelo ukuthi yonke insizwa yokumangala, inhlonipho nothando iphelile. Bathi: zibolile!
Ngisho uMnu Dijkgraaf nezinye schetenwappers Piss e ibhulukwe yabo kumnandi njengoba bechaza ukuthi isayensi imisebenzi nokuthi imvelo njll, Okwamanje lo egowaanzin, umuzwa tuft futhi pioniertjegevoel Dutch a la Anthony Fokker ashaya emehlweni abo personable.
Ngamafuphi, ama-rigs, idiots, psycho-and sociopathes. Ngokushesha phezulu futhi phansi usuku lonke kuma-tapreader ukuze kutholakale amandla we-CO2 akhipha amandla.
Kuphela ngeSonto bangakwazi ukushayela azungeze abadala, uthwele ukudla futhi ama-headphone verschonenm eminye bephoqeleka (6G ukuthi) usuku lonke ukulalela Bach, Barber, Schubert njll .. Ngaleso Barber emva zonke bomculo German futhi naphezu WW mina WW II namanje abakhiqizi abakhulu emhlabeni.
8 December 2016 ku-13: 17
Ake banethemba laba bantu wake basanguluke, kodwa ngiye gquba ikhanda kanzima njengoba yena asesikhundleni uhlelo wobushiqela yinkimbinkimbi senhlekelele, ukuzazisa, ubugovu ikakhulukazi ukuhaha nokuthanda umhlambi ukuziphatha.
8 December 2016 ku-13: 22
Kukhona impi engacacile eqhubekayo futhi efakazela le dokhumenti: "Izikhali ezithulile zezimpi ezithulile"
Ukuhlonipha umkhosi we-25 wenkomfa yokuqala ye-Bilderberg, le dokhumenti iphuma ku-1979. Itholakale ku-1986 kumkopishi we-Boeing. Kubonisa ukuthi i-WWIII ayidli ngendlela ejwayelekile futhi isebenza kusukela ku-1954:
"Le ncwadi ibonisa iminyaka eyi-25th yempi yezwe yesithathu, okuthiwa i-'Qiet War ', eqhutshwa ngokusebenzisa impi yezilwane, ilwe' nezikhali zokuthula '.
Le ncwadi iqukethe incazelo eyethula yale mpi, amasu, futhi yisikhali.
May 1979 # 74-1120 "
Uma isikhali esicacile sisetshenziswa kancane kancane, umphakathi ulungisa / uvumelanisa kuze kube khona futhi
ufunda ukubekezelela ukuphikisana kwawo empilweni yabo kuze kube yilapho ingcindezi (nge-psychological via
umnotho) uba mkhulu kakhulu futhi baqhekeka. Ngakho-ke, isikhali esicacile yiluhlobo noma
izimpi eziphilayo. Ihlasela amandla, izinketho, nokuhamba kwabantu ngabomphakathi ngokwazi, ukuxhaphaza nokuhlasela imithombo yabo yamandla emvelo nemvelo, kanye namandla abo engokwenyama, engqondweni, nangokomzwelo kanye nobuthakathaka. "
http://www.stopthecrime.net/docs/SILENT%20WEAPONS%20for%20QUIET%20WARS.pdf (ikhophi ecacile)
@Martin, mhlawumbe ungabheka idokhumenti ngokuqondile.
Ingxoxo noDkt. UBarry Trower
8 December 2016 ku-13: 29
Enye idokhumenti efakazela ukuthi izwe lesithathu lisetshenziswe kanjani lezi zinambuzane
8 December 2016 ku-16: 09
@Averroes, shocker. Ngicwecwe ngokuphelele lokho engikufundile, leli dokhumenti lifakazela cishe konke okwenzekayo okuzungezile. Ungakubona, ukubumbana komphakathi kuyisici esibaluleke kakhulu:
i-p.6: I-Quite War yabizwa ngokuthula yi-elite yamazwe ngamazwe hero hero yomhlangano ku-1954.
Kubonakala sengathi i-Bilderberg
I-8: Ikhwalithi yemfundo Isigaba semfundo kufanele sibe sekilasini lesigaba esincane kunazo zonke, futhi lokho akunakwenzeka ekilasini elingaphansi. Ngenxa yokukhubazeka okunjalo, ngisho nekilasi eliphansi kakhulu, abantu abanalo lincane uma kukhona ithemba lokuzikhukhumeza ekugcineni kwabo ekuphileni. Leli fomu lobugqila libalulekile kunani elithile lokuhleleka kwezenhlalakahle, ukuthula, nokuthula ukuze kube nesigaba esiphezulu sokubusa.
Ku-NL sibona ngokubuyisela nokukhushulwa kwemali yokufunda (VVD)
Ikhasi le-9: Umphakathi angase abe nomuzwa wokuthi into ethile ayiphutha, kodwa kungenxa yobuciko bokuthi isikhali sithulile, abakwazi ukuveza i-feeli yabo
ngendlela enengqondo, noma ukuphatha inkinga ngokuhlakanipha. Ngakho-ke, bayakwenza
Angazi ukukhala usizo, futhi angazi kanjani ukuzihlanganisa nabanye ukuzivikela ngokumelene nalo.
Izinethiwekhi ezingenantambo kanye ne-SMART technolgy kubonakala kimi.
ikhasi 15: Njengoba amandla iyisihluthulelo kuwo wonke umsebenzi ku-
ubuso bomhlaba, kulandela ukuthi ukuze bathole amandla amakhulu, izinto zokusetshenziswa, izinto, kanye nezinsizakalo ohlelweni lwezwe lomsebenzi wesigqila, kubalulekile ukuba nesiteleka sokuqala esitelekeni emkhakheni wezomnotho. Ukuze silondoloze isikhundla sethu, kubalulekile ukuthi sibe nolwazi oluphelele lwezomnotho kuzo zonke izici zezomnotho.
ubunjiniyela bomnotho wezwe.
Ibika izimpi ze-Amafutha nase-Netherlands izinkinga zamafutha phakathi ne-70.
onjiniyela P. 34 :. Economic Ukufinyelela yi efanayo ekutadisheni ukuziphatha umnotho kanye umthengi zomphakathi ngokukhetha okuyisisekelo lezimpahla zoals yenkomo, ikhofi, uphethiloli, noma ushukela ngokucophelela, bese kubangela ushintsho kungazelelwe noma ukushaqeka e wentengo noma ukutholakala, ngaleyo ndlela ukukhahlela isabelomali somuntu wonke kanye nemikhuba yokuthenga engakhiwe.
Ukukhwabanisa okufakelwayo, kuyilapho imikhiqizo eyanele / ukudla kutholakala esitokisini.
blZ. I-56: i-unit unit kumele ihlukaniswe, futhi imfundo yomphakathi elawulwa nguhulumeni kanye nezikhungo zokunakekela izingane kufanele zenzeke ngokwengeziwe futhi ngokomthetho
iphoqelelwe ukuze iqale inqola yamama nobaba esikhathini esingangaphambili. I-inoculation yezidakamizwa zokuziphatha [Ritalin] ingasheshisa ukuguquka komntwana (okudingekayo).
ADHD, izihlukaniso, ubukazi ... leli gumbi lesisekelo lomphakathi labhujiswa.
Labo abangasebenzisi ubuchopho babo bangcono kunelabo abanakho
akukho ubuchopho, ngakho-ke lesi sikole esingenangqondo noma i-jelly-fish, ubaba, umama, indodana,
futhi indodakazi, izilwane eziwusizo eziphathekayo noma abaqeqeshi ofanayo.
8 December 2016 ku-22: 05
Ividiyo emfushane ngokuchazwa kwesikhashana kusuka ku-WWII, e-1954, ngesikhathi seWirtschaftswunder idlule empini ye-WWII yodwa
8 December 2016 ku-22: 20
Impilo ye-Solo nokuxhumana noWal Mart
9 December 2016 ku-15: 36
10 December 2016 ku-15: 16
I-Catholic University yaseNew South Wales (bheka ukubhekisela ku-Pawelec) e-Australia idlala indima ebalulekile ekuthuthukiseni ubuchwepheshe be-quantum namakhompyutha ikakhulukazi.
umqeqeshi u-Andrea Morello unikeza ividiyo elandelayo isethulo (esontweni?!) siphi i-compum computing ihlanganisa. Kuyaphazamisa kakhulu, ngoba kufundiswa (i-AI) futhi kuyinamathisela uthuli oluhlakaniphile kuyo futhi ufake igridi yokulawula isamba (matrix) emhlabeni jikelele ku-3D ngisho naku-4D.
https://www.technologyreview.com/s/517091/how-smart-dust-could-spy-on-your-brain/ (KUMELE UKUFUNDA)
10 December 2016 ku-15: 20
Ichaza ukuthi kungani imishanguzo nezifo zenziwa i-PRS:
"Khohlwa i-RFID yendabuko ... i-Smart Dust ilapha. Kuyinto encane kangangokuba ingangeniswa emzimbeni ngokusebenzisa iFlu shot shot. "
10 December 2016 ku-15: 26
Imibiko ye-MSM kwizinhlayiya ze-nano i-dust smart:
10 December 2016 ku-15: 28
10 December 2016 ku-15: 40
Xhumana nobuchwepheshe be-Quantum
I-Smart Dust njengombono ovela e-United States Defence Research Projects Agency (DARPA) kanye ne-Research and Development Corporation (RAND) ekuqaleni kwama-1990. Sisebenzisa i-anecdote yezempi evela phezulu ngenxa yokuthi kwakungamaqembu omcwaningi wezempi owaqala ukucabanga nge-Smart Dust, kodwa ukusetshenziswa okusebenzayo kwezobuchwepheshe kungasetshenziswa cishe noma iyiphi imboni. Uthuli emasimini ukuqapha izitshalo. Uthuli emafektri aqapha ukukhishwa kwemishini. Uthuli emzimbeni wakho ukuqapha isimo sakho sonke sokuhlala kahle. Uthuli emahlathini okulandelela amaphethini wokufuduka kwezilwane, imimoya nomswakama.
Izwe lonke lingalinganiswa nalolu hlobo lobuchwepheshe bezinzwa ezivamile.
10 December 2016 ku-16: 08
Amalungelo obunikazi abathandayo:
I-US 9289511 B2
Ukudalulwa kwamanje kuhlobene ne-nanoparticle ene-biocompugated ehlanganisa i-biocompatible dotum dot conjugated ku-moi targeting moiety. I-targeting moiety ivumela ukuba i-nanopaticle ibophe umakhalekhukhwini wesifo somdlavuza noma i-pathogenic organism. Ichashazi quantum, phezu excitation ngu soft-x-reyi, ikhipha imisebe ehlasela kagesi at a imvamisa zokukhanya oku-ultraviolet, Ngaleyo ndlela allo wing ngesiphazamiso DNA etholakala iseli umdlavuza noma umzimba pathogenic
Uhulumeni wase-United States unamalungelo athile kule nqubo. I-DE-AC02-06CHI1357 phakathi kwe-United States uMnyango Wezamandla ne-University of Argonne, LLC njengomqhubi noma i-Argonne National Laboratories.
Ukudinga ukugcinwa kwamandla okusebenza kahle nokudlulisa ukushisa kufaka phakathi ububanzi obuningi bobuchwepheshe obuhilela noma yiluphi uhlobo lokudala amandla, ukugcina nokusetshenziswa. Kule nkathi ukwanda okwandisa ukushisa fluxes namandla imithwalo izicelo ezihlukene njengesi imishini kwezokwelapha, amandla electronics, ophinde uvuseleleke, izitholele nezinto zokuya, uketshezi Ukupholisa zinhlelo Kudingekile Thuthukisa ukushabalalisa ukushisa, Thuthukisa kuhle kwegezi, futhi uzandise amadivayisi esaphila.
I-nanoparticles yesiliva enezindawo ezithile zomhlaba kanye nendlela yokuyikhiqiza
I-US 8454986 B2
I-nanoparticles yesiliva inezinhlelo eziwusizo esimeni esiphuthumayo sama-nanomaterials. esiliva okuyisibonelo nanoparticle izicelo zihlanganisa biocides zavela, antimicrobial futhi izibulali-magciwane, amakhemikhali electronic, Uyinki esiliva conductive, izicelo yezokwelapha, nilimaza ukunakekelwa, solar panel kanye nama-smart ingilazi.
10 December 2016 ku-16: 11
10 December 2016 ku-16: 20
I-Espionage ne-Proven Realistic Technology (SMART)
InvenSense sika ezinyakazayo kokulandela, alalelwayo nendawo ezisekelweni, namasevisi kungatholakala eziningi emhlabeni ngobukhulu kanye brand-kuhlanganise yisakhiwo sodumo kakhulu Smartphones, amaphilisi, kokungagqokwa, drones, amadivayisi okudlala, internet sezinto, imikhiqizo yezimoto, nezilawuli kude nama-smart TV.
I-Google no-Magic Leap (VR, cabanga ngomagazini wezomnotho2017)
10 December 2016 ku-16: 48
@Averroes, linikeza i-Iphone incazelo ehlukile..kuthanda ukwabelana nokuxhuma lolu lwazi izwe elisha livulekele kimi!
11 December 2016 ku-14: 51
Cha, ngiyabonga, uma nje kusakazeka futhi wonke umuntu angazithola esiphethweni sakhe.
13 December 2016 ku-18: 49
Ubuningi buchazwe, umgomo omkhulu. Impi ingokomoya:
15 December 2016 ku-21: 24
Unyaka i-5777 iqala kahle ..., mhlawumbe i-j-matria kwi-loslate:
"Umklomelo wezibonelelo ezijensi zokunakekela ezempilo, izinhlangano zomthetho zendawo kanye nezendawo, noma izinhlangano zokuphepha zomphakathi ukusiza ama-ejensi anjalo ekuklanyeni, ekusunguleni nasekusebenzeni izinhlelo zobuchwepheshe zokulandelela izindawo zabantu"
Ingabe sisakwazi lokhu?
15 December 2016 ku-21: 29
I-NBC ingaphambili? I-2017
16 December 2017 ku-12: 05
Indoda exwayisiwe ibalwa ngamabili?
« Abashayeli bezimali be-Crash, Inkinga, Ukuphendula, Isixazululo emphakathini we-cashless
Kungani umhlaba ushintshiwe waba yijele elivulekile phakathi neminyaka embalwa »
Ukuvakashelwa okuphelele: 9.468.772
Buzwa bukhoma noMartin Vrijland kuTelgraaf.nl noWilson Boldewijn (ividiyo)
Ingxabano phakathi kukaMark Rutte noTherry Baudet ifakazela ukuthi akufanele uvote
Nikeza abezindaba isithunzi, bahlabele unobhala wombuso (amaHarbers): ukuthengiswa kokuthembeka
Ukhetho lwaseYurophu kanye ne-FvD net net ('ukudlwengula ngesibonelo sabafiki)
UMartin Vrijland op Ingxoxo yocingo noWilson Boldewijn evela kuDe Telegraaf: uchungechunge mayelana nezinkolelo ze-conspiracy
Isigqila somholo op Buzwa bukhoma noMartin Vrijland kuTelgraaf.nl noWilson Boldewijn (ividiyo)
Heray op Ingxoxo yocingo noWilson Boldewijn evela kuDe Telegraaf: uchungechunge mayelana nezinkolelo ze-conspiracy
Ukushona kwelanga op Buzwa bukhoma noMartin Vrijland kuTelgraaf.nl noWilson Boldewijn (ividiyo)
Joyina abanye ababhalisile abangu-1.593